Google Street View 2.0.0.224017492 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.0.224017492 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ Google Street View
Google Street View ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်တို့သည်လည်းလူတိုင်းကိုတွေ့မြင်ရန်အဘို့အသင့်ကိုယ်ပိုင် Street View ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ကင်မရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Street View အသင့်ဖြစ်ပြီလားကင်မရာဖြစ်စေသုံးပြီး 360 ဓါတ်ပုံ Create, ထို့နောက်သူတို့ကိုနေရာချခြင်းနှင့် Street View app ကို အသုံးပြု. မြေပုံပေါ်တွင်ဆက်သွယ်မှုထည့်ပါ။
ဒေသခံလမ်းညွှန်များအဆင့်နယူး 6+ နှင့် Street View အသိမှတ်ပြုဓာတ်ပုံဆရာ:
သင်တစ်ဦး Ricoh Theta V ကိုကင်မရာချိတ်ဆက်နှင့်သင်လမ်းလျှောက်အဖြစ် Street View ဖန်တီးစက်ဘီး, ဒါမှမဟုတ်မောင်းနိုင်သောနေရာအသစ်က "ဗီဒီယို Mode ကို" beta ကို, ကြိုးစားပါ။ ယခုအသစ် mode ကိုသင့်ကင်မရာမှဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နှင့်သင်က Google Maps ကိုမှထုတ်ဝေသည့်အခါချိတ်ဆက် Street View ပုံရိပ်တွေသို့ပြောင်းပေးပါတယ်။
Google Street View အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Google Street View အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Google Street View အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Google Street View အား အခ်က္ျပပါ
keapps3209 စတိုး 69 26.38k
Google Street View ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Google Street View အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.0.224017492
Google Street View APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ